Budgie Desktop 11 inotanga kuvimba nemaraibhurari eQT nekusiya GTK | Linux Vakapindwa muropa
Budgie Desktop 11 inotanga kuvimba nemaraibhurari eQT nekusiya GTK
Joaquin Garcia | | Desks
Iyo desktop yekuparadzirwa kweSolus yakagadzira tarisiro yakawanda mukati megore rapfuura uye haisi yepasi nekuti yaive inoshanda uye yakajeka. Ikery Doherty akazivisa nezvemwedzi waMbudzi izvo iyo inotevera vhezheni Budgie Desktop 11 yaizoburitswa mukati memwedzi waZvita, asi izvo hazvina kuitika.
Iwo maraibhurari eGTK pamwe neshanduro yeGnome yavakashandisa yakakonzera Budgie Desktop 11 kuti isabude zvinoenderana nehurongwa hwakarongwa. Asi timu yacho yakwanisa kuigadzirisa, kunyangwe nenzira yakaoma.
Sezvo vakatadza kugadzirisa matambudziko, Budgie Desktop 11 timu yekusimudzira yakatanga kushandisa QT maraibhurari izvo zviri kubatsira kugadzirisa kunetsana kwaivapo mukusimudzira. Aya maraibhurari eQt anoshandiswa muPlasma neKDE kunyorera anozotsiva mamwe maraibhurari eGTK nemaraibhurari eVala.
Budgie Desktop 11 yatanga kushandisa QT maraibhurari, asi ichave yekupedzisira?
Uye kunyangwe hazvo vhiki rapfuura iyo Gnome stack yavakashandisa yakagadziridzwa uye neizvi vanogona kugadzirisa akati wandei matambudziko, chokwadi ndechekuti Budgie Desktop 11 ichaenderera nepfungwa iyi.
Uye sezvo ivo vakagadzirisa matambudziko aivapo pakombuta, Doherty akazivisa izvo mumazuva mashoma anotevera, vashandisi vanoda kunakidzwa neyekutanga yekuvandudza vhezheni yeBudgie Desktop 11, vhezheni yakamirirwa nevakawanda kuti vazive maficha matsva edesktop iyi.
Zvinosuruvarisa Hatizive kana Qt maraibhurari auya kuzogara kana kuti angori marara raibhurariChero zvazvingaitika, mumashoko emutungamiri weprojekiti, zvinoita sekunge vauya kuzogara kunze kwekunge zvajeka kuti mashandiro evashandisi akaipa.
Iyo Solus desktop inoda kubvisa Gnome nemaraibhurari ayo, chimwe chinhu chinoita senge chine musoro kwandiri, asi ini handizive kana QT maraibhurari iri sarudzo yakanaka. Dzimwe nharaunda, senge Kujekerwa kwakasarudza kugadzira avo maraibhurari, chimwe chinhu chinoratidzika zvine musoro, asi chokwadika, haasi mapurojekiti ese ane zviwanikwa zvakawanda sekugadzira maraibhurari avo, haufunge?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Budgie Desktop 11 inotanga kuvimba nemaraibhurari eQT nekusiya GTK
Julio Antonio Garcia akadaro
Zvakanaka, kushandisa QT kunoratidzika sesarudzo hombe kwandiri. Kana vasingakwanise kushandisa GTK, nei vachizodzoreredza vhiri zvakare kana paine QT? Izvo zvinoita sekunge hazvina musoro zvachose kuti desktop yega yega inoshandisa maraibhurari ayo akagadzirwa uye uye neayo, pakupedzisira iko kutambisa kwesimba kunogona kupihwa kune zvimwe zvinhu zvinobatsira, sekuvandudza ruzivo rwevashandisi kana kudzikamisa nharaunda.
Pindura kuna Julio Antonio García
pakuverenga izvi «... Ini handizive kana QT maraibhurari iri chaizvo yakanaka sarudzo.» Ini ndasara ndichishaya kuti sei uchitaura izvozvo? Iwe uri fan yeGTK kana QT kuvenga? kana kuti pane nharo yehunyanzvi yekuitsigira, ndinofunga kune akati wandei mafomu aenda kuQT nekuda kwehunyanzvi zvikonzero (zvavo), kune aesthetics pamwe ivo "vakataridzika zvirinani" mu gtk, asi nekuda kwekunakirwa kwemavara.
Brotli: nyowani yekumanikidza algorithm yekumhanyisa iyo Internet
Waini 2.0: iyo nyowani vhezheni yeWindows inoenderana dura reUnix